YEYINTNGE(CANADA): Thursday, August 26
26 August 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/26/20100အကြံပြုခြင်း
လေးစားရပါသောဘဘဦးတင်ဦး,ဘဘဦးဝင်းတင်နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာ ၊ နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့တဘက်သတ် လက်ခမောင်းခတ်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ၊ အံခဲခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့မချိတင်ကဲဖြစ်နေမှုတွေကြောင့် တိုက်တွန်းအား ပေးနှိုးစော်လွှာအဖြစ် ဒီစာကိုရေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့အောင်သီးအောင်ပွင့်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့NLDဟာ ၁၉၉၀ထဲက လူထုရဲ့တပ်ဦးပါတီ ဖြစ်ခဲ့တာပါ ၊ လူထုကလဲ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ဆန္ဒပြုခဲ့တဲ့ပါတီအဖြစ်ရော၊ခွပ်ဒေါင်းအလံကိုတရားဝင်ကိုင်ဆွဲခွင့် ရခဲ့တဲ့ပါတီအဖြစ်ရော ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးစီးတဲ့ပါတီအဖြစ်နဲ့ပါ ခုချိန်ထိမျှော်လင့်နေဆဲဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းရေး ၊ လူ့အခွင့်အရေးများအပြည့်အ၀ရရှိရေး ၊ အာဏာရှင်ဆန် သောအစိုးရမျိုး နောင်ဘယ်သောအခါမှမပေါ်ပေါက်ရလေအောင် ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုတ်မြစ်များ ခိုင်မာစွာချမှတ်ရေး ၊ တိုင်းရင်းသားညီအကိုများ နိုင်ငံရေးခွင့်တူညီမျှရရှိပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ရေး ၊ ပြည်သူလူထု၏ဘ၀ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကာ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်စေရေးဆိုတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဦးတည် ချက်တွေကြောင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်အင်အားစုအားလုံးရဲ့ဦီးဆောင်ပါတီအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ သလို စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဓိကထားဖြိုခွင်းတိုက်ခိုက်မှုကို တလျှောက်လုံးခံခဲ့ရတာလဲ မြင်သိခံစားရပါတယ် ။
Voice of Burma Information Group Issue No.776, August 22, 2010
12 2010 Commentary
Contact: The Canadian Friends of Burma (CFOB), Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; E-mail: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နအဖမှ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည့် အတွေ့ အကြုံပေါ်တွင် မူတည်၍ ကြိမ်းသေနိုင်ရန် စီစဉ်နေသည်ကို ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည် နှင့်အမျှ ထင်ရှားလာသည်။ ထင်ရှားသည့် ဥပမာများမှာ ----
(၁) ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး ပါတီများထဲမှ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သည့် ဦးသုဝေခေါင်းဆောင်သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ၏ ပါတီဝင်များ စာရင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မီရှင်သို့ ပေးအပ်ရပြီး ၎င်းကော်မီရှင်က ထောက်လှန်းရေးကို တဆင့်ပေးပို့၍ ပါတီဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို တအိမ်တက်ဆင်း လိုက်လံကောက်ယူပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကို ပြုလုပ်လျှက်ရှိခြင်း။ လူပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် နေသော ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များကိုမူ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိခြင်း။ ဤလုပ်ရပ်သည် အတိုက်အခံ ပါတီဝင်များကို ၎င်းပါတီမှ ကြောက်လန့်၍ နှုတ်ထွက်စေခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ရန် ဖိအားပေးခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ ချိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) NLD ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မှတ်ပုံမတင်ခြင်းကို သဘောတူလက်ခံခဲ့ပြီးမှ တစင် ထောင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု National Democratic Forces (NDF) ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့ အုပ်စုအား အစိုးရက ပါတီမှတ်ပုံ တင်ခြင်းကို လက်ခံအတည်ပြုပြီးခါမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်က ၎င်းတို့အား နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူပြီး အုပ်ချုပ်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ပါ့မည် နောက်နောင် ဤသို့သော် ပြစ်မှုကို ကျူးလွန် မည်မဟုတ်ပါဟု ဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုး၍ အသနားခံစာတင်ရမည်ဟု ဦးချိုးလိုက်ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်၏ သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး NDF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ဂုဏ်သိက္ခာညှိုနွမ်းသွားစေရန် တမင်ရည် ရွယ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့က လက်မှတ်မထိုးနိုင်ဟု ငြင်းလျှင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်က ၎င်းတို့ကို ပေးအပ်ထားသော အာဏာကို သုံး၍ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ (၄) ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ရန် ရည်ရွယ်ပုံရသည်။ NDF ခေါင်းဆောင်များ NLD နောက်ခံရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်နိုင်ချေရှိနေခြင်းကို တမင်ရိုက် ချိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။
(၃) ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့တွင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီဖွင့်ပွဲသို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်းမှုး ဗိုလ်ချုပ်သောင်း အေး လိုက်ပါပြီး တမြို့လုံးကို ၎င်းအမိန့်ဖြင့် ကြံ့ဖွတ်အလံများစိုက်ထူ၍ ကြိုဆိုခိုင်းခဲ့သည်။ မြေပုံမြို့နယ်ကြံ့ဖွတ်ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် ငွေကျပ်သိန်း (၂၀)၊ တယ်လီဖုန်းအလုံး (၁၅) လုံး၊ ဆိုင်ကယ် (၂) စီး၊ စပိဘုတ် (၁) စီးကို ပေးအပ်သွားခဲ့သည်ကို ကြည့်လျှင် ၎င်းငွေကြေး ပစ္စည်းများသည် နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေးပစ္စည်းများသာဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်ချုပ်သောင်းအေး ပိုင်မဟုတ်။ ထိုအချက်က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ အခန်း (၃) အပိုဒ် (၁၅) (ဈ) ၌ “နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြေး၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်ပစ္စည်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း” ရှိလျှင် ကော်မီ ရှင်က မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဟု အတိအလင်းဆိုထားသည်။ သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုသော်၎င်း၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကို သော်၎င်း အလျဉ်းမတွေ့ရပေ။
(၄) တဖက်မှလည်း ဥပဒေအခန်း (၃) အပိုဒ် (၁၅) (စ) ၌ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် တစ်ခုခု၏ အစိုးရ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ အခြားအထောက်အပံ့တို့ကို တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ သြဇာခံယူခြင်းပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဟု ဆိုထား ပြန်သည်။ ဤအချက်သည် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီများအား ပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော နိုင်ငံများ၊ မျိုးချစ်မြန်မာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးမှုကို ဗြောင်ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တဖက်မှလည်း ၎င်းတို့ကြံ့ဖွတ်ပါတီကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာထဲမှ လိုအပ်သလောက်ကို ထောက်ပံ့ပြီး အနိုင်ရရန် အရှက်ကင်းမဲ့စွာဖြင့် ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
(၅) တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဒေါက်တာတူးဂျာဦးစီးသည့် ကချင်တိုးတက် ရေးပါတီ (KSPP) နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တိုးတက်ရေးပါတီ (NSPP) တို့အား ပါတီတည် ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားသော်လည်း တည်ထောင်ခွင့်မပေးပဲ ဆိုင်းငံ့ထားပြီး မကြာသေးခင် ကမှ မှတ်ပုံတင်သည့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီက ကချင်ပြည်နယ် (UDPKS) ကိုမူ ချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့် ချပေးလိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ချပေးခဲ့သည်ကို လေ့လာ ကြည့်သောအခါ ၎င်းပါတီကို နအဖနှင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ထူထောင်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်း UDPKS ပါတီ ခေါင်းဆောင်တို့မှာ ယ္ခင်ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝင်များဖြစ်သည်။ တဖန် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ နယ်တွင်လည်း မှတ်ပုံတင်မရှိသူများကို ရွေးကောက်ပွဲအမှီ မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လွမ်းမောင်တို့က စည်းရုံးရေး ဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ယ္ခုအချိန်ထိ တရားဝင်စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည်မှာ ကြံ့ဖွတ်ပါတီတခု တည်းသာဖြစ်သည်။
(၆) ဒုတိယပညာရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဘာသာခြားတက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား “ အနာဂါတ် နိုင်ငံတော်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ သွေးထွက်သံယို ဖြစ်တာ မမြင်ချင်ရင် ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးပါ” ဟု ပြောကြားချက်သည်၊ ငါတို့အာဏာမရလျှင် အာဏာပြန်သိမ်းမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုံးကလို ၎င်းတို့ မနိုင်လျှင် အာဏာအပ်မည်မဟုတ်ဟု သုံးသပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်ရက်သည် (၃) လ မပြည့်၊ ထို (၃) လမပြည့်တပြည့် ကာလတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများက မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်စာရင်းကို အသေးစိတ်တင်ပြခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြေးများပေးသွင်းခြင်း၊ စည်းရုံးရေးအတွက် အခန်းများငှါးရမ်းရခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကောက်မီရှင်ကို (၇) ရက်ကြို၍ အကြောင်းကြားရခြင်း၊ လမ်း၊ ရပ်ကွက်များတွင် ဟောပြောခွင့်မရခြင်း၊ ကျောင်းခန်းမများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ များတွင် ဟောပြောခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်းများ ကြုံတွေနေရစဉ် တဖက်မှလည်း ကြံ့ဖွတ် ပါတီက နယ်မြေတိုင်းတွင် တံခါးမရှိ ဓားမရှိ၊ အစစ်အဆေးကင်းရှင်းစွာ စည်းရုံးရေး ဆင်းနေခြင်း၊ နေပြည်တော်တွင် အစိုးရပေးထားသော အဆောက်အဦကြီးတွင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ရုံးကို ဖွင့်လှစ်ပြီး အစိုးရထောက်ပံ့ငွေများ၊ မော်တော်ယဉ်များ၊ အဆောက်အဦများကို သုံးစွဲချင်တိုင်း သုံးစွဲခွင့်ရနေသလို ကြံ့ဖွတ်အသင်းဝင် (၈) သန်းကျော်ကို ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အမာခံများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ကြံ့ဖွတ်အသင်းရုံးခန်းများကို ကြံ့ဖွတ်ပါတီရုံးခန်းများ အဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ရနေပေသည်။ ထို့ပြင် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်သည် နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကိုလည်းယူထားသဖြင့် အစိုးရသည် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ မစခင်ကတည်းက ဖြစ်နေသဖြင့် ၎င်းအစိုးရသည် ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အနိုင်ရရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အစိုးရအာဏာကို အသုံးပြုကာ တဖက်သတ်အသုံးချ အနိုင်ယူမည့်ပွဲဟု သုံးသပ်မိသည်။
(၇) စာပေစီစစ်ရေးတွင် ရေတပ်မှ ဒုဗိုလ်မှုးကြီး မျိုးမြင့်မောင် တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်း စာနယ်ဇင်းများကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဝေဖန်မှုများကို ဗြောင်းပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အစိုးရထုတ်သတင်းစာများက “ မည်သူမဆို နိုင်ငံတော်တည် ငြိမ်းရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း သို့မဟုတ် ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်း” ပြုလုပ်လျှင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်မှ နှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရမည်။ ကျူးလွန်သော အဖွဲ့ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းမည် ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အထက်ပါ အချက်သည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုစည်းရုံး ခွင့်ကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက် ဟန့်တားမှုပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အားနည်းချက်များကို ထောက်ပြဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုမှသာ မည်သူ မှန်သည်၊ မည်သူမှားသည်၊ မည်သူကရိုးသားတည်ကြည်သည်၊ မည်သူက ကလိန်ကကျစ် ဆိုသည်ကို လူအများက သိကြမည်ဖြစ်သည်။ မည်သူက ရပ်ရွာတိုးတက်ရေးကို လုပ်နိုင်မည်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးကို လုပ်နိုင်မည်။ စီးပွားရေးစံနစ်ကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်သည် တို့ကို သိမှသာ ပြည်သူက မည်သူ့ကို မဲပေးရမည်ကို ပြုလုပ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နအဖမှ အခန်း (၃) အပုဒ် ၁၅ (ဃ) ၌ “လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် လူအများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့် တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ရေးသားမှု၊ ဟောပြောမှု သို့မဟုတ် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ပြုလုပ်ခြင်း” ကို ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းပါတီအား မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဟု ဆိုးထားခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ မည်သူမှန်သည် မည်သူမှားသည်၊ မည်သူက ကိုယ်ကျင့် တရား ကောင်းသည်၊ မည်သူက မကောင်း၊ မည်သူက နိုင်ငံရေး၊ စီပွားရေး၊ လူမှုရေးအမြင် ရှိသည်တို့ကို တဖွဲ့နှင့် တဖွဲ့ နှိုင်းယှဉ် စကားစစ်ထိုးသော ပွဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားရာတွင် လူဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများ၊ ယ္ခင်က ပြုလုပ်ခဲ့သော အပြစ်အနာအဆာများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားရှိပါက အတိုက်အခံဖက်မှ ၎င်းအချက်များကို တင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့မှသာ ပြည်သူက မိမိရွေးချယ်မည့်သူသည် အရည်အချင်းရှိသူ တည်ကြည်သူအဖြစ် သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အထက်ပါပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရ သူခိုးကို ခိုးပါသည်ဟုပြောခဲ့သော်၊ သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေသည်ဟု စွဲချက်ဖြင့် အရေးယူခံရတော့မည်ဖြစ်သည်။
(၈) ပို၍ဆိုးသည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲရက် သတ်မှတ်ပြီးနောက် နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့်ဒေသများသို့ ကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသည့် သုံးပွင့်ဆိုင် အမာခံအုပ်စု ခေါ် Tripartite Core Group (TCG) တွင် ကုလသမဂ္ဂ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာလူမှုရေးအဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။ ၎င်း TCG အုပ်စုကို ၎င်းတို့လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုမှတဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆက်လက် ပြီး အစိုးရမှ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု နအဖမှ ပြောဆိုပြီး အဖွဲ့လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်း အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းတွင် အသက်ရှက်ကျန်ရစ်သူ ၈၀၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ယနေ့ ထိ မလုံမခြုံသေးရာ အမိုးအကာတို့ဖြင့် နေထိုင်နေကြရတုံးဖြစ်သည်။ TCG ၏ နေရာတွင် လူမှုရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနနှင့် ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ပြည်လည်နေရာချထားဋ္ဌာနတို့မှ တာဝန်ယူရပြီး နာဂစ်လွန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလုပ်တို့ လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း နအဖမှ မလိုအပ် တော့ဟုဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကူညီမှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သဖြင့် လူမှုရေးကူညီမှု ပြုလုပ်နေသည့်သူများ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပြန်ကြရသည်။ ဗီဇာအသစ်လျှောက်သူများအနည်းဆုံး (၄) လမှ ၂ နှစ်အထိ ပြည်ဝင်ခွင့်ရရန်စောင့်ရသည်။ ထိုကြောင့် နာဂစ်ဒါဏ် ခံစားနေရသော ဒုက္ခသည် များကို ကူညီပံ့ပိုးမှုများ၊ များစွာကျဆင်းသွားခဲ့ရပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်မလာဘဲ ပို၍ အတိဒုက္ခရောက်ကြရသည်။ TCG ထွက်သွားပြီးနောက် နိုင်ငံခြားမှ ကူညီသူများကို ဗီဇာထုတ် ပေးမှု ၁၀ပုံ တပုံကိုသာ ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားမှ ကူညီသူ အဖွဲ့များ များစွာနည်းပါး သွားခဲ့ရသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အကြောင်း ၂ ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သူများကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အတိုက်အခံပါတီတို့အား အစိုးရမှ နှောက်ယှက်မှုများကို နုင်ငံခြားသားများ မသိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပုံရသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ အာရှဋ္ဌာနလက်ထောက် ဒါရိုက်တာ Phil Robertson က ပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်တချက်မှာ နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့မှု ပြတ်တောက်၍ ငတ်မွတ်ဆာလောင်နေသော ဒုက္ခသည်များကို ကြံ့ဖွတ်ပါတီမှ စားကြွင်းစာကျန်များပေး၍ ၎င်းတို့ပါတီကို မဲပေးရေးအတွက် အခွင့်အရေးတရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တချက်ခုတ် ၂ ချက်ပြတ်ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒ ပေးပွဲ မမျှတမှု၊ ညစ်ပတ်မှုတို့ကို သတင်းပေးပို့နိုင်သည့် နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်းများကို ပြည်တွင်း၌ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်ပထုတ်လိုက်ပြီး ကူညီထောက်ပံ့မှု မရသဖြင့် ငတ်မွတ်အတိဒုက္ခ ရောက်နေကြနေသူများကို ငွေကြေး အစားအသောက်၊ အိမ်သောက်ပစ္စည်းတို့ဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့်ကို တဖက်သတ် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးအားဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် ကြံ့ဖွတ်ပါတီလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မဲ အပြတ်အသတ် နိုင်ရရေးကို ဦးတည်စီစဉ်ထားသည့် ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်မှုကို သင်္ခန်းစာယူ၍ ၂၀၁၀ တွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရန် စံနစ်တကျ ဒေါင့်စုံမှစဉ်းစား တွေးခေါ်ပြီး မနိုင် နိုင်အောင်ညစ်နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ပြုလုပ်ထား ကြောင်း ထင်ရှားစွာတွေ့နေရသည်။
(၁) ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနှင့် NLD ပါတီကို ကန့်သတ်လိုက်ခြင်း။
(၂) ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်ကို အလုံးစုံအာဏာကုန်ပေး၍၎င်း ကော်မီရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် သည် အပြီးဖြစ်စေရမည် စောဒကတက်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု နအဖကိုယ်စား တဖက်လှည့် ညစ်ပတ် နည်းသုံးစွဲခြင်း။
(၃) လူထုကြည်ညိုသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်း ဆောင်များ၊ ခွန်ထွန်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်စသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ထိန်းသိမ်း ထားခြင်း၊ စည်းရုံးရေးစွမ်းရည် ပြည့်ဝသောနိုင်ငံရေးသမားများကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ထားခြင်း။
(၄) တိုင်းရင်းသားများ ထောက်ခံသည့် ခေါင်းဆောင်များ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို လက်မခံဘဲ ချန်လှပ်ထားခြင်း။
(၅) အတိုက်အခံပါတီများအား စည်းရုံးရေးဆင်းခြင်းကို ကန့်သတ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် ပိတ်ပင် ထားခြင်း။
(၆) တိုင်းပြည်ကဏ္ဍ၊ အဆောက်အဦတို့ကို ကြံ့ဖွတ်ပါတီတခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ပေး ခြင်းနှင့် အစိုးရရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ကြံ့ဖွတ်ပါတီအတွက် ဂရိုဘယ်များ ချမှတ်ပြီး အသံလွှင့်ပေးခြင်းတို့ကိုလျို့ဝှက်စွာ စီစဉ်ထားခြင်း။
(၇) ကြံ့ဖွတ်အသင်းသည် နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ် ထို့ကြောင့် ၎င်းအသင်းသည် လူထုစည်းဝေး ပွဲကြီးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို အသင်းဝင် အဖြစ် အတင်းအဓမ္မ ဝင်စေခြင်း။ အသင်းဝင်များကို အခွင့်ထူးပေး၍ ချီးမြှောက်ခြင်းတို့ဖြင့် မြို့နယ်တိုင်းတွင် အစိုးရစားရိတ်ဖြင့် ရုံးခန်းများဖွင့်လှစ်၍ လူထုကို တဖက်သတ်စည်းရုံးခဲ့ပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခါနီးတွင် ကြံ့ဖွတ်အသင်းမှ ကြံ့ဖွတ်ပါတီသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည် အရှက်ကင်းမဲ့၊ ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားလုပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမျှ ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
(၁) ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးရေးကာလ (၃) လအတွင်း လူထုကို တတ်နိုင်သမျှ ထိုးဖောက် စည်းရုံးရန်။
(၂) ရွေးကောက်ပွဲရောက်ရန် နီးကပ်သည်နှင့် တပြိုင်တည်း သပိတ်မှောက်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ညီညွတ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို၍ သပိတ်မှောက်ကြရန်။
(၃) မိမိစည်းရုံးထားသည့် လူထုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် လူထုလှုပ်ရှားမှုသို့ ဆိုသည့် အသွင် ပြောင်းလဲပစ်ရန်။
(၄) NLD ပါတီ CRPP တို့နှင့် တွဲဘက်၍ ကြားဖြတ်အစိုးရတရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင် ညှိုနှိုင်းထားကြရန် လိုအပ်သည်။ အတိုက်အခံများ မည်ကဲ့သို့မျှ မနိုင်ရန် နည်းမျိုးစုံသုံး၍ ဗြောင်ညစ်ပတ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲအား လူထုတိုက်ပွဲဖြင့်သာ တိုက်၍ လူထုအစိုးရတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရန် ပြုလုပ်ကြဘို့ အချိန်ရောက်ပြီဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။
Burmese Canadian Activists urge to Canadian Government for Burma Crimes Inquiry
Tel: (613) 992−5516
Fax: (613) 992−6802
Dear the Honourable Minister Lawrence Cannon
As you fully aware, Burma is presently in the midst ofasevere political and humanitarian crisis
that calls for immediate international attention.
We are proud to be Canadians of Burmese origin witnessing consistence and unwavering support of
Canadian Government led by the Right Honourable Prime Minister Stephen Harper and Ministry of
foreign Affairs led by you to the restoration of Democracy and Human Rights in Burma.
The successive military regimes that hold the power by coupe since 1962 knows too well to play
and exploit the international and regional politics to their benefit. They won’t heed any call and
they won’t care any blame. They rule the people by force and the only thing they understand
serious is also force. Unless leading international democratic countries show to take real action,
there won’t be any improvement to the suffering of Burmese people and the stability of the
There will beasham election in November of this year to reinstate the authoritarian regime led
by same generals. At the same time the generals of Burma are secretly and actively pursuing to
hold the nuclear weapon with rough North Korea regime, the defiance act against UNSC
As mentioned in the Washington Post on August 20, 2010, the evidence against Burma's junta
has been piling up for many years. Thousands upon thousands of girls and women have been
raped by the Burmese army asatactic of war; children have been press-ganged to serve as
porters; civilians have been used as human minesweepers in operations against armed ethnic
groups; 3,500 villages have burned to the ground in recent years; millions of people have been
forced from their homes. These are some of the many crimes against humanity sponsored by the
generals who rule their Southeast Asian nation of 50 million people.
A growing group of politicians, legal experts, human rights leaders, human rights organizations
and governments are asking for the establishment ofaCommission of Inquiry into crimes against
humanity and war crimes in Burma. The governments of Britain, Australia, the Czech Republic,
Slovakia and recently the United States, 80 Canadian Parliamentarians,aformer senior legal
adviser to the ICC, former and current UN Special Reporters on human rights in Burma, and the
Burma Lawyers Council are among the governments, organizations and individuals who have
deplored the situation in Burma and supported the creation ofaU.N. Commission to look into
alleged crimes against humanity and war crimes in Burma.
On June 2, 2009, Geoffrey Nice, the principal prosecution trial attorney in the case against
Slobodan Milosevic in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and Pedro
Nikken, executive committee member of the International Commission of Jurists and former
President of the Inter-American Court of Human Rights, wrote in the Washington Post and urged
the UN Security Council to authorizeaCommission of Inquiry into crimes against humanity and
war crimes in Burma.
In March 2010, the International Tribunal in New York, organized by Nobel Women Initiatives,
called for the establishment ofaCommission of Inquiry into crimes against humanity and war
crimes committed by the Burmese regime.
Also in March 2010, at the UN Human Rights Council session, the UN Special Rapporteur for
the Human Rights Situation in Burma, Tomas Ojea Quintana, formally urged the UN to consider
the possibility of establishingaCommission of Inquiry into alleged crimes against humanity and
war crimes committed by the regime.
In his report, Quintana said: “Given the gross and systematic nature of human rights violations in
Myanmar [Burma] overaperiod of many years, and the lack of accountability, there is an
indication that those human rights violations are the result ofastate policy that involves
authorities in the executive, military, and judiciary at all levels.”
The White House said inastatement that it believes the commission could advance the cause of
human rights in Myanmar, also known as Burma, by "addressing issues of accountability for
responsible senior members of the Burmese Regime.
It is long overdue that the world acknowledges that the Burmese regime is guilty of heinous and
brutal acts against its own people.
For this reason we, undersigned organizations, the supporters of the pro-democracy movement
for Burma based in Canada and individual friends of Burma, are writing to you with an urgent
appeal to ask the Government of Canada to show its leadership as before by joiningacall to
create an International Commission to investigate alleged war crimes by Burma’s Military Junta.
We look forward toaresponse to this letter and immediate action to help resolve the crisis in
Timothy Zaw Zaw